नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): मनिषा र सम्राटको दाम्पत्य जीवन झण्डै डेढ वर्ष चलेपनि अब भने उनीहरु छिटै छुटि्टने पक्का, छिटै अदालती प्रक्रिया सुरु गर्ने !
मनिषा र सम्राटको दाम्पत्य जीवन झण्डै डेढ वर्ष चलेपनि अब भने उनीहरु छिटै छुटि्टने पक्का, छिटै अदालती प्रक्रिया सुरु गर्ने !
नायिका मनिषा कोइराला र पति सम्राट दाहालवीचको सम्बन्ध बिग्रन थालेका हल्ला बिबाह गरेको केही समयपछि नै सार्वजनिक भएका हुन् । आफ्नै फेसबुकमार्फत हल्लालाई आधार दिने खालका अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेकी मनिषा कानुनीरुपमा अझैपनि सम्राट दाहालकी पत्नी हुन् । तर एक महिना भारत भ्रमणमा गएकी मनिषाले आफ्नै अपार्टमेन्टमा आयोजित साथीभाईवीचको पार्टीमा चाँडै सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेको मनिषाले बताएकी छन् । अक्सर केही नयाँ कुरा सार्वजनिक गर्नुपरे साथीभाईको जमघट रोज्ने मनिषाले हालै यस्तो घोषणा गरेको टाइम्स अफ इन्डियाले छापेको छ । डेढ वर्षअघि आफुभन्दा ७ बर्ष कान्छा सम्राट दाहालसँग लगनगाँठो कसेकी मनिषाको बिहे भएको ६ महिनापछि नै मनिषाले फेसबुकमार्फत आफुले
सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको बताएकी थिइन् । त्यसको केही समयपछि उनी फेसबुकमार्फत नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै श्रीमान सम्राट आफ्नो सबैभन्दा खराब सत्रु भएको बताइन् । असमझदारीका बाबजुत मनिषा र सम्राटको दाम्पत्य जीवन झण्डै डेढ वर्ष चलेपनि अब भने उनीहरु छिटै छुटि्टने पक्का भएको समाचारमा उल्लेख छ । सम्बन्ध विच्छेदका लागि अब छिटै अदालती प्रक्रिया सुरु गर्ने मनिषाले बताएकी छिन् । मनिषा अब मुम्बइतिरै बस्ने सोँचमा छिन् । मुम्बइको आफ्नै निवासमा पुराना साथीहरुलाई बोलाएर पार्टी दिएकी मनिषाले फेरी बलिउडमा फर्किने इच्छा पनि जाहेर गरिन् । बलिउडमा फेरी फर्किन चाहेको अवसरमा मनिषाले पार्टी दिएकी हुन् वा श्रीमान सँग स